रोशनी शाहीको उजुरीले नेकपामा उथलपुथल, गृहमन्त्री थापाले दिए यस्तो निदेर्शन! -
रोशनी शाहीको उजुरीले नेकपामा उथलपुथल, गृहमन्त्री थापाले दिए यस्तो निदेर्शन!
१८ आश्विन २०७६, शनिबार १६:०४ 116 पटक हेरिएको
काठमाडाैँ – संसद् सचिवालयमा कार्यरत स्वास्थ्यकर्मी रोशनी शाहीले निवर्तमान सभामुख कृष्णबहादुर महराविरुद्ध प्रहरीमा किटानी जाहेरी दिएकी छन् ।उनले निवर्तमान सभामुख आफूमाथि बलात्कार प्रयास गरेको भन्दै प्रहरीमा किटानी जाहेरी दिएकी हुन् ।
रोशनीको उजुरीपछि महरा पक्राउ पर्ने विषयमा सत्तारुढ दल नेकपाका कार्यकर्ताहरबीच चर्चा परिचर्चा सुरु भएको छ ।
नेपालको राजनीतिक इतिहासकै हाइप्रोफाइलको यो स्क्यान्डलका कारण महराले सभामुख पदनै गुमाइसकेका छन् । अब उनी पक्राउ समेत पर्ने सम्भावना किटानी जहेरीले बढाएको छ । प्रहरी स्रोतका अुनसार रोशनी आफ्ना श्रीमानसहित किटानी जाहेरी दर्ता गर्न प्रहरीकहाँ पुगेकी हुन्।
रोशनीले महानगरीय प्रहरी वृत्त नयाँ बानेश्वर पुगेर जबरजस्ती करणी उद्योगमा महराविरुद्ध किटानी जाहेरी दिएकी हुन् । बलात्कार प्रयासको अभियोगमा प्रहरीमा निवर्तमान सभामुख महराविरुद्ध किटानी जाहेरी परेको महानगरीय प्रहरी परिसर काठमाडौँका प्रवक्ता तथा डिएसपी होविन्द्र बोगटीले बताए।
महानगरीय प्रहरी परिसर काठमाडौंका प्रमुख एसएसपी उत्तमराज सुवेदीले पीडित रोशनीले महराविरुद्ध किटानी जाहेरी दिएको हनाल उनी पक्राउ पर्ने सम्भावना बलियो बढेको बताए।
यो प्रकरणलाई अन्यत्र मोड्ने गरी रोशनीले आफ्नै सुरुको बोली फेर्दै आफूमाथि कुनै यौन दुर्व्यवहार नभएको दाबीसहित बयान दिएपनि उपलब्ध तथ्यहरुको विश्लेषणबाट महरा रोशनीको निवास पुगेको पुष्टि भएपछि महरालाई कारबाहीको दायरामा ल्याउन मनावअधिकार आयोगदेखि सबै कोणबाट दबाब परेको थियो ।